War Deg Deg:-Dowladda Yemen oo Qiratay Gantaalkii Lagu Laayay Qaxooti Soomaali ahaa – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
War Deg Deg:-Dowladda Yemen oo Qiratay Gantaalkii Lagu Laayay Qaxooti Soomaali ahaa
Wasiirka arrimaha dibadda dalka yeman Hishaam Sharaf Abdullah oo kulan la qaatay wakiilka gaar ah ee dalka yeman u qaabilsan hay’ada socdaalka aduunka ee IOM Laurent De Boeck ayaa waxa kaga wada hadleen diyaaradii helicopterka aheyd ee sida qaldan gantaalka ugu tuurtay dooni ay saarnaayeen qaxooti Soomaaliyeed taa oo mareysay xeebta magaalada Xudeediya ee dalka yeman.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka yeman Hishaam Sharaf Abdullah ayaa siweyn u cambaareeyay gantalkaasi lagu riday dooni siday qaxooti Soomaaliyeed isagoo ku tilmaamay mid liddi ku ah sharciyada arrimaha bini aadanimada.
Kulanka oo dhacay maalinimadii shalay aheyd ayaa wasiirka arrimaha dibadda dalka yeman waxa uu qirtay in ay fuliyeen diyaardaha dagaalka ee dalka Saudi Arabia oo bartilmaameedsaday muhaajireen Soomaaliyeed.
Wasiirka ayaa sidoo kale u balan qaaday muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay falkaasi in ay siin doonaan adeegyo caafimaad oo lagu dabiibayo.
Dhanka kale sarkaalka IOM ee kulnka ay wada qaateen wasiirka ayaa ugu mahadceliyay dowlada yeman waajibaadka ay iska saartay dadkii ku dhaawacmay Gantaalka ee haatan jiifa isbitaalada yemen.
Dowladda Soomaliya ayaa dhawaan sheegtay in diyaardaha dagaalka ee dalka Saudi Arabia iyo kuwa Yemen in ay fuliyeen weerarkaas islamarkaana jawaab laga sugayo.
Weerarkaas waxaa ku dhintay 42-ruux In ka badan oo Soomali u badan.